နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: ကြိုး
မှန်းဆ ( ရှာ ) ဖွေရက်
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:08 AM
Labels: ရင်တွင်းဖြစ် အချစ်ကဗျာများ
roseayemaung May 9, 2013 at 4:10 PM
ရင်ခုန်ရသူ(ကဗျာ၊အချစ်၊ဟာသ၊အလွမ်း) May 9, 2013 at 4:59 PM
witch83 May 9, 2013 at 8:06 PM
တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ ပို့(စ်)တင်မယ်ပြောပြီး ပျောက်နေတယ်လို့ တွေးနေတုန်း သူပြန်ပေါ်လာတယ်။ :) ဝေးနေပေမဲ့ ဖြတ်ရခက်တဲ့ သံယောဇဉ်ဆိုတာကိုတော့ အပြည့်အဝ နားလည်တယ်။ :)))
မိုးငွေ့........ May 10, 2013 at 1:06 AM
စံပယ်ချို May 10, 2013 at 4:59 AM
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) May 10, 2013 at 5:22 AM
မိုးဦးသော့၍ လာခြေပြီ ။
မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) May 10, 2013 at 8:51 AM
မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) May 10, 2013 at 8:54 AM
မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) May 10, 2013 at 9:01 AM
အဟမ်း..အဟမ်း ..(ချောင်းကလည်း ဆိုးတယ်ကွာ) :P
နွေလ May 11, 2013 at 2:06 AM
တစ်သက်တော့ မဆွေးလိုက်ပါနဲ့ မကြီးရယ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 11, 2013 at 7:23 AM
rose ရေ....မိုးနတ်လဲ ရို့စ်ကိုသိပ်သတိရတာပဲဟယ် :)
ဒီလိုပါပဲ ရင်ခုန်ရယ် * ရင်ခုန်ရသူ *
ဟုတ် မမ * witch83 *
* အသူ * ရေ...သတိရနေတယ်ဝေ့ :)))
Thanksalot !!! * မမမိုးငွေ့ *
ထင်တာပဲ မမ * စံပယ်ချို * ရယ် :PPPP
ဟုတ်ပါ့ * အကိုမင်းဧရာ *
ဒါဆို မိုးနတ် ဒိထက်ပိုပြီးကြိုးစားရအုံးမှာပေါ့နော် ice !
* မောင်ရေခဲ(အ၀တ်နီ) *
မိုးနတ်က ရင်ထဲရှိတာလေးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့
မိုးနတ်ခံစားချက်နဲ့တော့ ကိုက်ညီပါတယ် ဒါပေသိ...
ရေခဲတုံးလေး ကဗျာက ပိုမိုက်တယ် ဒါဆို
:PPPPPPPPPPPPPPPP * မမထရီဆာ *
မိုးနတ်ကို လှောင်နေသလားကွယ် :)
အိုးးးးးးး ဆွေးပါရစေ မောင်လေးရယ် * နွေလ *
ရိုးမြေကျ May 15, 2013 at 1:31 AM
အော် တသက်တောင် ဆွေးတော့မှာပါလား။ မိုးနတ် မမပြောတဲ့ ဆေးသောက်ဖြစ်လား။
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 15, 2013 at 7:17 AM
ဟုတ် မမ * ရိုးမြေကျ *
ဒါမဲ့ ဈေးတော့ ကြီးသားဗျ !
ဒါထက် မ ကိုဖဘမှာ ရှာလို့ကိုမရဘူးးးးးး
အဲဒါ ဘိုဖြစ်ရတာလဲဟင် !!!
ဒီမှာ လွမ်းလွန်းလို့ သေတော့မယ်တကယ် :P
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) May 16, 2013 at 3:05 AM
မြတ်ကတော့ ဝေးလေ လွမ်းလေ ပိုချစ်လေလေပါပဲကွယ်.. :)
(ဘလော့တွေဖက် ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်တာ သိပ်ကြာသွားလို့ ညီမလေးဆီလည်း စာလာမဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီနေ့တော့ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။)
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 16, 2013 at 6:18 AM
ဟုတ် ....မိုးနတ်ဆီ သတိတရနဲ့
အလည်လာတဲ့ အတွက် မမြတ်* မြတ်ပန်းနွယ် *
ဘလော့ဂါတွေ ဘလော့ဘက်ကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်ကြပဲ
သတိတရ တကူးတကနဲ့ အိမ်လာလည်ပေးတာကိုတောင်
ညလေးလဲ မ ကို အရမ်းသတိရနေပါတယ် မရေ..
မ ဆီတောင် ညလေးလဲ မရောက်တာကြာပေါ့
မဒမ်ကိုး May 17, 2013 at 6:32 AM
ဆွေးရတက်တွေနဲ့ တသက်စာမဝေးစေဖို့ ထပ်ကာမေးလိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်
Zeo Lay June 18, 2013 at 2:08 AM
နှတ်ဆက်စကားလေ တောင်မှ မပြောနှိုင်ခဲ့ပါ
လွမ်း ..... ။
ချစ်တတ်သူတိုင်း နားလည်တတ်ရင် July 28, 2013 at 6:45 AM
မိုးနတ်ရေ ကောငါးတယ် လာလည်သွားတယ်နော်